I-Auto Locksmith Services - I-Sparky Express Roadside Assistance
Imisebenzi eseceleni komgwaqo
Into ingezwe enqoleni yakho
Hlola, alikho ikhadi lesikweletu elidingekayo!
Yeqa ukuze uthole imininingwane yesevisi
Vula imidiya efakiwe ekubukweni kwegalari
Usizo lweSparky Express Roadside
Isevisi ye-Auto Locksmith
Intengo ephansi Kuthengisiwe
Usizo Lomgwaqo / Insizakalo Yokugwedla
Isevisi Yokukhanda Imoto
Indawo Yokusebenzela: Idolobha / Isifundazwe
I-Ajax, Ontario UMarkham, e-Ontario I-Oshawa, Ontario IScarborough, Ontario I-Pickering, e-Ontario Toronto, Ontario I-Whitby, e-Ontario
Car Locksmith Service / Ajax, Ontario - $50.00 Car Locksmith Service / Markham, Ontario - $50.00 Car Locksmith Service / Oshawa, Ontario - $50.00 Car Locksmith Service / Scarborough, Ontario - $50.00 Car Locksmith Service / Pickering, Ontario - $50.00 Car Locksmith Service / Toronto, Ontario - $50.00 Car Locksmith Service / Whitby, Ontario - $50.00
Ayikwazanga ukulayisha ukutholakala kokulanda
Isevisi ye-Auto Locksmith. Shayela: +1(647)-819-0490
Nalu uhlu lwezici zesevisi yethu yomshini wokukhiya, futhi yini okufanele uyilindele lapho ucela insizakalo yethu yomshini wokukhiya okuzenzakalelayo kwaSparky Express:
Phendula ngokushesha - kungakhathaliseki ukuthi ucela insizakalo yethu yomkhandi wezikhiye ezizenzakalelayo ngocingo noma nge-inthanethi, sizohlala siphendula ngokushesha futhi sikushayele ukuze uhlole isimo sokuvala imoto yakho ngocingo noma ukuze siqinisekise isevisi, inani, futhi sikunikeze i-ETA enembile.
Impendulo yobungcweti - Ochwepheshe bethu benkonzo yomkhandi wezikhiye zezimoto banekhono eliphezulu futhi bangochwepheshe, banolwazi olunzulu ekuhlinzekeni le sevisi yosizo lomgwaqo kunoma iyiphi imoto.
Ukuvumelana nezimo - Inkonzo yethu yokukhiya izikhiya iyatholakala kuzo zonke izimoto, kungakhathaliseki ukuthi zimi kuphi. Singakusiza ngenkonzo yethu yomkhandi wezikhiye zezimoto ngisho noma imoto yakho ipakwe endaweni yokupaka engaphansi komhlaba, ibheke odongeni, noma ikuyiphi indawo.
Care - asisoze sayivula imoto ngokuxhamazela. Inhloso yethu ukuvula imoto yakho ngaphandle kokulimala noma ukuklwebheka emotweni yakho.
Azikho izindleko ezengeziwe ngenkonzo yebhethri uma ukukhiya kwakho kungenxa yebhethri lemoto elifile.
Okhiye Abakhiyiwe Emotweni, Imibuzo Evame Ukubuzwa.
Ngingabiza othile ukuthi avule imoto yami?
Uma ingane, umuntu osekhulile ongasabeli, noma isilwane esikhiyekile ngaphakathi emotweni, sicela ushayele ku-911 ngokushesha. Uma usesikhala esivaliwe, ukhiyelwe ngaphandle kwemoto yakho futhi injini isebenza, zama ukuphuma ngokushesha ukugwema i-carbon monoxide asphyxiation, noma ushayele u-911 ngokushesha. Ngaphandle kwalokho, sicela uthinte iSparky Express noma enye insizakalo yokukhiya imoto endaweni yangakini.
Uyivula kanjani imoto uma ikhiyiwe?
Ukukhiya izimoto kuyisimo esijwayelekile. Uma kwenzeka kuwe, cabanga ngezinketho zakho ezinhle kakhulu. Ukuhlala uzolile kuzohlala kusiza kunoma yisiphi isimo esingaba nengcindezi.
Zibuze ukuthi ngabe unokhiye oyisipele noma yikuphi. Mhlawumbe oshade naye noma ilungu lomndeni unalo.
Uma kungenjalo, ungashayela i-Sparky Express ngensizakalo engabizi, esheshayo nenobungcweti bemoto.
Noma kunjalo, futhi ungahlola ezinye izinketho ezimbalwa. Izimoto eziningi zinokukhiya okuzenzakalelayo okukhiya yonke iminyango ngasikhathi sinye uma ucindezela inkinobho yokukhiya ku-fob yokhiye. Kodwa-ke ezinye izimoto zisavala iminyango kuphela hhayi iziqu. Eminye iseyizandla, futhi umnyango ngamunye kufanele ukhiywe ngawodwana. Zungeza imoto yakho bese uzama ukuvula umnyango ngamunye nesiqu. Uma une-hatchback futhi umnyango wesiqu uvulekile, nonke nisethwe uma nje nikwazi ukukhuphuka ngaphezu kwezihlalo zemoto.
Ngabe iSparky Express ingahlinzeka ngemoto yokukhiya imoto kunoma iyiphi imoto?
Isevisi yethu yokukhiya imoto iyatholakala kunoma iyiphi imoto. Ukusuka ezimotweni ezijwayelekile kuya kumaloli amakhulu *, singakusiza ukuthi uvule imoto yakho ngokuphepha uma ukhiyelwe ngaphandle noma uma ibhethri lemoto yakho lifile noma likhishiwe, okwenza ukungakwazi ukuvula iminyango.
* Ngemisebenzi yokukhiya iloli sicela uvakashele i- Isevisi Yokukhiya Amaloli ikhasi, njengoba amanani nokutholakala kwehlukile kunesevisi yethu ejwayelekile yokukhiya izimoto.
Ngingayicela kanjani le sevisi yokukhiya imoto?
Nakhu ukuthi ungacela kanjani ukukhiya kwethu imoto sisiza:
Ngocingo (kunconyiwe). Sicela ushayele ku (647) -819-0490 bese unikeza opharetha indawo yakho nohlobo lwemoto.
Online. Ungabhuka insizakalo yethu yokukhiya imoto ku-inthanethi, khona lapha kuleli khasi.
Isevisi yethu ye-Car Lockout iyatholakala kunoma yimuphi umshayeli kulokhu indawo yesevisi.
Ngeke sakubuza imininingwane yekhadi lesikweletu, noma sicele noma iyiphi inkokhelo kusengaphambili, noma ngabe ubhukha insiza yethu yokukhiya imoto ku-inthanethi. Zonke izinkokhelo zifuneka ngemuva kokuba umsebenzi usuqediwe, futhi uchwepheshe wethu uzocubungula inkokhelo yakho ngekhadi lesikweletu, ikhadi lasebhange, ukheshi noma amanye amafomu okukhokha anjenge-Apple Pay, i-Google pay, njll.
Ngokusekelwe kuzibuyekezo ze-3 Bhala ukubuyekeza
Imoto Jump Start
Ushintsho lweTire lonyaka
Izinqubomgomo & Izinto
Bhalisela ama-imeyili ethu
Â© 2022, Usizo lweSparky Express Roadside